TTSweet: နိူင်ငံတော်ကို ဘာကြောင့်စွန့်ခွါ ....
Posted by T T Sweet at 2:41 PM
Thandar Lwin August 12, 2011 at 3:24 PM
ဖတ်ရတာ ကြက်သီးမွှေးညှင်း ထသည့် အထိ ၀မ်းနည်းဝမ်းသာ ခံစားရပါတယ် ။
AMK August 12, 2011 at 3:28 PM
သိပ်ကောင်းတဲ့ ပို့ ပါ. အခွန်တွေ အရမ်းပေးရခြင်း။ ရင်နာနာ နဲ့ကိုယ့်ပေးရတဲ့ အခွန်တွေကို ဘယ်မှာသုံးလိုက်တယ် လို့အစိုးရရဲ့တရားဝင် စာရင်း မပြခြင်း အခွန်ပေးထားပြီး ကိုယ့် ပြည်သူပြည်သား အခွန်ထမ်းတွေကို ရေခြားမြေခြားမှာ အကာအကွယ် မပေးပဲ နှိပ်ကွက်ခြင်း တွေဟာ နိုင်ငံသား စွန့်လွတ်ဖို့စဉ်းစားကြ၇တဲ့ အချက်တွေပါပဲ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ ဦးခြိမ့် နှင့် တီတီဆွီ သို့ 
အရမ်းသဘောကျတယ်။ နောက်မှ ထပ်ဖတ်ဦးမယ်။
Thandar Lwin August 12, 2011 at 4:16 PM
မမဆွိ အီးမေး ပို့ချင်လိုက်တာ ။ thandarlwin2006@gmail.com ကို အီးမေးလိပ်စာလေး ပို့ပေးပါလား။
T T Sweet August 12, 2011 at 4:39 PM
သန္တာလွင်ရေ ... အစ်မ email က sweetee2008@gmail.com ပါ။ အရင် ကွန့်မန့်တွေမှာလဲ ရေးဖူးပါတယ်။ လာအားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါညီမ။
sosegado August 12, 2011 at 5:39 PM
မှန်ကန်သော လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲခွင့် တစ်ခုပါပဲ၊
သတင်းစာကို ဖတ်ပြီးတော့ ငါအရက်သောက်တာ မင်းမကြိုက်ဘူးသီချင်းကို သတိရသွားတယ်၊
သက်ဝေ August 12, 2011 at 5:53 PM
စကားလုံးတိုင်း စကားလုံးတိုင်းကို နှစ်သက်သဘောကျမိပါတယ်...
အထူးသဖြင့်တော့ မြန်မာသံရုံးရဲ့ ရပ်တည်ချက်နဲ့ တာဝန်မဲ့မှု၊ သံရုံးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ရိုင်းစိုင်းရင့်သီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးနဲ့ ပြုမူ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ထောက်ပြထားတာ အကြိုက်ဆုံးပါပဲ...
မောင်တင်အေးတဲ့ ။ ဖားပြီးရေးနေတာများ အသိသာကြီး ။ လွတ်လပ်ရေး အကြာင်းပြောတာ ဗိုအောင်ဆန်းအကြောင်းကို တမင်ကွေ့ပတ်ပြီးရေးသွားတယ်။ တိုင်းပြည်အစိုးရကို မဟုတ်တာထောက်ပြ ၊ အကြံဥာဏ်ပေးကြလို့လားတဲ့ ။ သူကိုယ်တိုင်တောင် သူထင်ရာမြင်ရာ သူ့ယုံကြည်ချက်ကို ရဲရဲရေးရဲလို့လား ။ အဲလိုရေးပြီး ဝေဖန်ရင် သူ့ပထွေးတွေက စွဲစိလို့အခုလိုမျိုးတောင် အသံကောင်းဟစ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါမျိုးလေးတွေရေးမှ ထမင်းနပ်မှန်မဲ့ဘဝဆိုရင်လည်း မပြောတော့ဘူး၊ ရေးသာရေး ၊ ဖားသာဖား ။ ဘယ်သူဘယ်လိုရေးရေး
လက်တွေ့ဘဝမှာ ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးသိတယ်။ ဒါမျိုးကို အချိန်ကုန်ခံပြီ ဘယ်သူမှမဖတ်ဘူး။ (ကျနော်တို့ပဲဖတ်တာ...ဟီး :P )
ma ma sweet...please let me share..
moe August 12, 2011 at 7:29 PM
pls. let me share
ဘေဘီ August 12, 2011 at 7:39 PM
ကောင်းလိုက်တဲ့ပို့စ် ဒီလို ခံစားချက်မျိုး
နီးပါးရှိကြပါတယ်။ မဆွိတီရေ ရှဲလိုက်မယ်နော်
mgchaint August 12, 2011 at 7:44 PM
ရပါတယ်ခင်ဗျာ.....။ မြန်မာကျုးပစ် နှင့် အန်တီဆွိ ဘလောက်မှ ရသည်လို့သာ ရည်ညွှန်းပေးပါ။
အဲဒီလို ရေးနေတဲ့သူကို နိုင်ငံခြားကနေတစ်လ ဒေါ်လာတစ်သောင်းပေးမယ်လို့ ခေါ်ကြည့် ၀မ်းသာအားရ ပြေးပါလိမ့်မယ် ထိပ်ဆုံးကနေ။
တချို့လူတွေက စပျစ်သီးလည်း ချဉ်တတ်ကြသေးတယ်လေ
ကိုယ်တိုင်က ပိတ်ခံထားရတော့ ဟိုနိုင်ငံမသွားရ ဒီနိုင်ငံမသွားရ
Myanmar Good Knowledg Co., Ltd August 13, 2011 at 1:05 AM
မဆွိတီရဲ့ ဘလော့ကို ဖတ်လေ့ရှိပါတယ်။
ဒီပို့စ်ဟာ နိုင်ငံခြားမှာ ရောက်နေသူ/နေထိုင်သူများအတွက်သာမဟုတ်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာလူမျိုးများအတွက်
ရေးသားတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဦးခြိမ့် ရဲ့ အခုလိုစိတ်ဓါတ်ကိုလေးစားပါတယ်။
ကျွန်မက ဘယ်နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းဝင်မှမဟုတ်ပါဘူး။
မြန်မာအစိုးရကို အခွန် လစဉ်ပေးဆောင်နေသူပါ။
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ ကိုယ့်ကိုဝေဖန်ရင် အတိုက်အခံလို့ထင်နေတာက သူ့ရဲ့ အာဏာရှင်ဖြစ်ကြောင်း သာဓက တစ်ခုပါ။
ဒိထက်ဆိုးတာက ယျထာဘူတကျတဲ့ အတွေးအခေါ်ကင်းမဲ့ပြီး ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အမြင်ရှိတဲ့ သူတွေရဲ့ ကြည်ညိုမှုခံနေရတာကလည်း သူ့ရဲ့ အကြီးမားဆုံးသော တန်ခိုးအရှိန် တစ်ခုဖြစ်နေတာပါပဲ။
Myo Mon Yee Oo August 13, 2011 at 1:05 AM
ဒီလိုရေးတဲ့ အရေးအသားမျိုးစောင့်နေတာ ကြာပြီ၊ Singapore ကိုကော Myanmar ကိုကော ဒီမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေဟာ အခွန်ပေးဆောင်နေရပါတယ်။ Singapore ကို ပေးရတဲ့ အခွန်ဆိုတာ ထားပါတော့။ Myanmar နိုင်ငံအနေနဲ့ နားလည်ထားရမှာ Double Taxation ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ပါ။ ဘာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အားလုံး Singapore မှာ work permit, EP, PR, S Pass များ မြန်မာသံရုံးမှာ အခွန်ပေးဆောင်နေရပါသလဲ။
အခုလက်ရှိအစိုးရက လာဘ်စားမှုများကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူနေတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။
ကျွန်မပြောချင်တာက ဒီမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူအားလုံးစုပြီး မြန်မာပြည်ကို Myanmar Embassy in Singapore သံရုံး ကိုမကျေနပ်ကြောင်းစာတင်ရအောင်လား။
၁လ ၁လ အခွန်က ၁၂၀ ဆိုတာ နည်းတာမှ မဟုတ်တာ။
Myo Mon Yee Oo August 13, 2011 at 1:08 AM
ကျွန်မက စာ အရေးအသားသိပ်မကောင်းဘူးရှင့် ...
Anonymous August 13, 2011 at 2:01 AM
BRAVO.Thanks for your article.To maintain Myanmar Citizen Status,we need to pay unresonable tax give to them.No body can voice out this truth.Appreciate you.Carry on.
ဦးခြိမ့် ကျေးဇူးပဲဗျာ။ ပြောခွင့်ကြုံတုန်း ပြောရတာ။
နောက်ထပ်လဲ ပညာတတ် ၊ အတွေ့အကြုံရှိပြီး စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင် ဖြောင့်မတ်စွာ သုံးသပ်ထောက်ပြနိုင်တဲ့
ဘလော့ဂ်ဂါတွေ ထပ်ရေးနိုင်ရင် ရှု့ထောင့်စုံလို့ ပိုပြီး အထောက်အကူ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
ma yu August 13, 2011 at 11:09 AM
ဟုတ်တယ်။ သူတို့ တွေကစားသာလို့ ဖားနေကြတာ။ သူ့ သားသမီးတွေကိုတော့ နိုင်ငံခြားပို့ ထားတာတွေချည်းပဲ။
good post. pls let me share.
တန်ခူး August 13, 2011 at 11:43 AM
ဦးခြိမ့်ရေ... ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ ဒီစာဖတ်ပြီး ဆရာကိုဧရာနဲ့မမသီတာတို့ လို မောင်တထမ်း မယ်တရွက် စာရေးကြပါလားလို့တိုက်တွန်းချင်မိတယ်... နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ချစ်တဲ့ နိုင်ငံသားတယောက်မို့ရင်ဘတ်တူသူတွေပဲပေါ့... ဦးခြိမ့်ထောင်ပြသွားတဲ့ အချက်၂ခုကို သဘောကျမိတယ်... နိုင်ငံခြားမှာ စီးပွားရှာလို့ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို လှူဒါန်းပေးကမ်းနိုင်ခြင်းဆိုတာနဲ့နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိစွာ အသုံးချတတ်ခြင်း စည်းကမ်းနဲ့ ပြောဆိုနေထိုင်တတ်ခြင်းဆိုတာကိုပါ... နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်သွားလုပ်ကြသူချင်းအတူတူ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို လှူဒါန်းပေးကမ်းမှုမှာ ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်ကို မမှီကြပါဘူး...တခုပါပဲ...ကျွန်မတို့ မှာ နောက်တာဝန်ရှိနေတာက ကိုယ်ရတဲ့အသိဥာဏ်နဲ့ အတွေ့ အကြုံကို တိုင်းပြည်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးတွေအတွက် ဘယ်လိုလက်ဆင့်ကမ်း ပေးနိုင်မလဲ... နှမ်းတစေ့နဲ့ ဆီမဖြစ်ဘူးဆိုပေမယ့် ဆီဖြစ်အောင်နှမ်းစေ့တစေ့ချင်းဆီမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ မြင်မိတယ်... အဆိုးဆုံးအခြေအနေမှာ ဒီထက်မဆိုးရအောင် ဘာအကောင်းဆုံးတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့...နောက်တခုက ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူတွေ မစားကောင်းတဲ့အသီးကို ငါမစားဖူးဆိုတဲ့သစ္စာတရားရှိဖို့ပါအရေးကြီးပါတယ်... ဦးခြိမ့်ပြောတဲ့ သတင်းစာဆရာကြီးက အကောင်းဆုံးဥပမာပေါ့...
တန်ခူး August 13, 2011 at 11:47 AM
ဆက်ဆွေးနွေးဆရာလေးတွေ အီးမေးလ်ပို့ လိုက်မယ် ဦးခြိမ့်ရေ...
nyopyar88888 August 13, 2011 at 12:25 PM
အခွန်ပေး၇တာ ဘာမှမပြောလိုဘူး ။ ပေးလိုက်တဲ့အခွန်တွေကို နိူင်ငံတော်တိုးတတ်းရေးမှာသုံးသလား??? ပညာေ၇း၊ကျန်းမားရေး လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ ထိထိရောက်ရောက်မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးစေခြင်းတယ်။ အခုတော့ သူများချွှေးနည်းစားတွေ က သံအမတ်ကြီး အရက်ဖိုးဖြင့်လို့ ဖြင့် ကတော်တွေ ဈေးဝယ်ဖို့ ဖြင့် ။ မြန်မာပြည်ကလူကြီးတွေလာရင် ပြည့်တာဆန်ခဖြင့် ကာဆီနိုလောင်းဖို့ ဖြင့်၊ လူကြီးသားတွေလာရင်လဲ ပြည့်တွင်းကို ရေခဲ(မူယစ်ဆေး)၀ယ်သွင်းဖို့ အရင်းနှီးဖြင့်။လူကြီးသမီးလေးတွေရဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီးဖို့ ဖြင့် ဟင့် ဟင့်
ဖိုးတုတ် August 13, 2011 at 2:30 PM
အခွန်များရခြင်း၊ သံရုံးမှာ အခွန်ဆောင်ရတာ အဆင်မပြေခြင်းတို. ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အခြားနိုင်ငံသား ကူးပြောင်းရတဲ့ အဓိကအချက်လိုပဲ ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်၊
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အခြားနိုင်ငံသားမပြောင်းရအောင် အခွန်ကိုလျော့ပေးသင့်ပါတယ်၊ ၁၀%ကတော့ သိပ်ကိုများလှပါတယ်၊ အနည်းဆုံး မြန်မာပတ်စ်ပို.က အရှေ.တောင်အာရှနိင်ငံများကို ဗီဇာမလိုပဲ သွားလို.ရအောင် လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်၊
မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင် ပတ်စ်ပို.ဟာ မြန်မာပတ်စ်ပို. ထက် ဈေးပိုပေါပါတယ်၊ စလုံးပတ်စ်ပို.ဆိုရင် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၇၀ နဲ. U.S.A ၊ ဂျပန်နဲ. အီးယူနဲ. နိုင်ငံတော်တော်များများကို ဗီဇာမလိုပဲသွားလို.ရတယ်လို.ကြားဖူးတယ်၊
ဖိုးတုတ် August 13, 2011 at 2:31 PM
ကျွန်တော်က စလုံးမှာရှိတဲ့အခြေအနေ နဲ.ပဲ နှိုင်းယှဉ်ပြီးရေးပါ့မယ်၊ ဒါပေမဲ့ မြန်မာ အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို အခွန်လျော့ပေး ခဲ့ရင်တောင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခြားနိုင်ငံသား ခံယူမူဟာရှိနေဦးမှာပါပဲ၊ အခြားနိုင်ငံသား ခံယူမူက မြန်မာနိင်ငံရဲ့ အခွန်ကြီးမြှင့်မူတစ်ခုတည်းတင် မဟုတ်ပဲ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့ privilege ကွာဟမူ. အပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်၊
စင်ကာပူနိုင်ငံသား netizen တွေရဲ့ ကွန်မန်.တွေကြောင့် စလုံးအစိုးရက ပီအာနဲ. စင်ကာပူနိုင်ငံသားတို.ကို တဖြေးဖြေး ခွဲခြားလာလိုက် တာ ကျောင်းစရိတ်၊ ဆေးကုသ စရိတ်တို.မှာ သိသိသာသာ ကွာဟလာတာကိုတွေ. ရပါတယ်၊ နောက်ဆုံး မှာတော့ ပီအာဆိုတဲ့ status ဟာ အခြား EP, s-pass, တို.နဲ. သိပ်မခြားနားတော့ပါ၊ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာ အိမ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပီအာဖြစ်တာကလည်းကောင်းပါတယ်၊
ဖိုးတုတ် August 13, 2011 at 2:32 PM
ကျွန်တော့်နဲ.ခင်တဲ့ poly ကျောင်းဆင်း တစ်ယောက်ကိုမေး ကြည့်တဲ့အခါ သူ.က မြန်မာနိင်ငံမှာ အလုပ်ပြန်လုပ်ချင်ပေမဲ့ သူ.တတ်တဲ့ ပညာနဲ. မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုပ်လို. မဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ infrastructure ကောင်းကောင်း မရှိဖူးလို.ပြောပါတယ်၊ အဲ့ဒါကလည်းအမှန်ပါပဲ၊ ဒီမှာကျောင်းပြီး တဲ့သူတွေများများလဲ အဲ့ဒီလို အတွေးမျိုးရှိကြမှာပါ၊
ဦးခြိမ့်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံး မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် မစွန့်လွှတ်ရန် တိုက်တွန်းချက်ကို လေးစားမိပါတယ်၊ ဦးခြိမ့်ရဲ့ တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့စိတ်ကိုလဲ ပြေးမြင်ယောင်မိပါရဲ့၊
ဖိုးတုတ် August 13, 2011 at 2:33 PM
ဒါပေမဲ့ ဦးခြိမ့်ရယ်၊ တစ်ခါတစ်လေမှာ အခြေအနေ အချိန်ခါနဲ. ဘ၀ပေးအခြေအနေကြောင့် လုပ်ရတဲ့ အနေအထားလေးတွေ လည်းရှိတတ်ပါတယ်၊ တစ်ချို.မိသားစုဝင်တွေ ရဲ့ ကျောင်းစရိတ်နဲ. (စလုံးနိုင်ငံသား၊ ပီအာနဲ. နိုင်ငံခြားသားတို.ကျောင်းစရိတ်ကွာဟမူ) အခြားအထွေထွေ အကြောင်းများဟာမြန်မာနိုင်ငံသားစွန်.လွှတ် ချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်၊
အခြားနိုင်ငံသား ပြောင်းတဲ့သူ လည်းပြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသား အဖြစ်ဆက်လက် ရပ်တည်တဲ့သူလည်းရပ်တည်ပေါ့၊ အဲဒါက လူတိုင်းရဲ့ အခွင့်အရေးပါ၊ ဒီမိုကရေစီရဲ့အစလို.ပဲ ခံယူပါတယ်၊ အဲဒီ့လိုအခြားနိုင်ငံသားခံယူသွားတဲ့သူတွေမှာလဲ အခြေအနေကြောင့်သာ ပြောင်းသွားပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွေး၊ ကြီးပြင်းလာခဲ့တော့ သူတို.မှာလဲ မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်ကြဦး မှာပါ၊
ဖိုးတုတ် August 13, 2011 at 2:46 PM
အဲ့ဒီ့နိုင်ငံခြားသားပြောင်းသွားတဲ့သူတွေကို မပစ်ပယ်ပဲ သူတို.ရဲ့အားကို မြန်မာနိုင်ငံထူထောင်ရေးမှာ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ. ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆာင် ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားသင့်ပါတယ်၊
ကွန်.မန်.တင်ပြီး ခဏကြာမှာ ပျောက်သွားလို. ခွဲတင်လိုက်တာကိုတော့ ခွင့်လွှတ်ပါ၊
Bro & Sis, Thanks for your good post.
mgchaint August 13, 2011 at 9:40 PM
ကျွန်တော်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားကနေ တခြားနိုင်ငံသား ဖြစ်သွားတဲ့ သူကို ဘယ်လိုမှ မဆိုပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် မစွန်လွတ်ပါနဲ့ လို့လဲ မတိုက်တွန်းသလို စွန့်လွတ်လိုက်ရင်လည်း သူတို့အတွက် အကောင်းဆုံးအခြေအနေကို ဖန်တီးသွားတယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ အပြစ်မမြင်မိပါ။
သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေသေးတဲ့ သူတွေကိုတော့ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ (သို့မဟုတ်) မြန်မာပြည်အတွင်းမှ သတင်းစာမှာ ဆောင်းပါရေးနေသူတွေ အနေနဲ့ အဖို့ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်သွားလုပ်နေတာက တိုင်းပြည်အကျိုးကိုလဲ ရှိစေတယ်ဆိုတာ သိစေချင်သလို ထိုလူတွေကို နိုင်ငံသားမစွန့်လွတ်အောင် စွဲဆောင်နိုင်ရမယ်ဆိုတာ ကို သိစေချင်တဲ့ သဘောပါပဲ
ဖိုးတုတ် August 14, 2011 at 1:25 AM
ပြည်တွင်းသတင်းစာဆိုတာ အစိုးရရဲ့ mouthpiece ဖြစ်ပါတယ်၊ ဖားပြီးရေးတာကတော့အမှန်ပဲ၊ သူတို.က ပြည်ပကို ပညာတတ်တွေဆုံးရှူံးတာ တကယ်စိုးရိမ်လို.ရေးသလို အပြစ်တင်သလိုလိုနဲ. ပြည်ပမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး နိုင်ငံသားခံယူသွားတဲ့ သူတွေကို ပြောစရာသင့်တယ်ထင်လို. သူတို.ရဲ့ concern ကို အလုပ်သဘောမျိုးအရသာ ရေးလိုက်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါ တယ်၊ အဲဒီ့လိုမဟုတ်ပဲ တကယ့်စိတ်ရင်းထဲမှာတော့ မင်းတို.ပညာတတ်တွေဆိုတာ တိုင်းပြည်ကို ပုန်ကန်တတ်တယ်၊ မင်းတို. ပြည်တွင်းမှ မရှိလေ ကောင်းလေ ဆိုတာမျိုးလည်း သူ.တို.စိတ်ထဲမှာ ရှိချင် ရှိနေပါလိမ့်မယ်၊
မောင်တင်အေး (သရက်) ရေးသွားတာကတော့ လိုရာဆွဲပြီးရေးသွားတာအမှန်ပဲ၊ ကျွန်တော်လဲ သူတို.ရေးတာ မမှန်သလို မထောက်ခံနိုင်ပါဖူး၊ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ့ဆောင်းပါးရေးတဲ့ သူရဲ့ ရေးသွားဟန် က တော်ရုံတန်ရုံ မသိတဲ့သူဆိုရင် မှန်သလိုလို နဲ. တွေဝေသွားနိုင်ပါတယ်၊ ဦးခြိမ့်တုန်.ပြန်ချက် က ကောင်းပါတယ်၊ ထိထိမိမိရှိလှပါတယ်၊
ဖိုးတုတ် August 14, 2011 at 1:27 AM
နောက်တစ်ခုဆွေးနွေးချင်တာက အဲ့ဒီ့ DTA ကိစ္စကို လင့်လေးတင်ပေးရင် အခွန် ၂ ထပ်မပေးရေးကို စာဖတ်သူများ သိသွားပါလိမ့်မယ်၊ ကျွန်တော်အဲဒီ့ကိစ္စကို ဖတ်မိခဲ့ပါတယ်၊ ခင်ဗျားရဲ့သူငယ်ချင်းက သူ.ရဲ့ အမျိုးသမီးဘလော့မှာ တင်ထားပါတယ်၊ ကျွန်တော်က သူတို.နဲ.လည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ မရင်းနှီးတော့ ကြိုက်လား၊ မကြိုက်လား မသိတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ. လင့်မတင်ပေးတော့ပါဖူး၊
အဲ့ဒီ့ကိစ္စက လက်မှတ်ထိုးတာပြီးဖြစ်ခဲ့တော့ အဲ့ဒီ့သဘောတူ စာချုပ်ကို honor လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ခက်တာက စလုံးဘက်က အခွန်က သိပ်မများပါဖူး၊ အခွန် ဆောင်မဲ့ဆောင်ရင် စလုံးဘက်ကို ပဲ ဆောင်ကြပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ မြန်မာအစိုးရ ဘက်ကတော့ ၁၀%ကို စွန်.ဖို.ဆို တာ တော်တော်မလွယ်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်၊ လွှင့်ပစ်လိုက်ရင် အဆီတ၀င်းဝင်းနဲ. ဆိုသလိုမျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်၊ အဲ့ဒီ့ကိစ္စ ကိုပြန်ပြီး ဖော်ဆောင်သင့်ပါတယ်၊
ဖိုးတုတ် August 14, 2011 at 1:28 AM
ဦးခြိမ့်တို. လှူဒ္ဒါန်းတဲ့ကိစ္စကလည်း မွန်မြတ်သလို ကောင်းတဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ပြည်ပက နိုင်ငံရေး သမားတော်တော်များများ က ဘာမှတိုင်းပြည်အတွက် ရေရေရာရာမလုပ်ပဲ အန္တရယ်မရှိတဲ့ နေရာကနေ အော်ပြီး ဘေးထိုင်ဘိုင်ကျ ဘုပြောနေတာကတော့ မကောင်းပါဖူး၊ နောက်ဆုံး မကောင်းကြောင်းတွေပြောရင်းနဲ. အာလုံးမကောင်းတဲ့ သူတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်၊ ကျွန်တော်အဓိကဆိုလိုချင် တာကတော့ လောလောဆယ်ဆယ် အခြေအနေမှာ ဘယ်အစိုးရပဲ အုပ်ချုပ်နေနေ ပြည်ပကစေတနာ ရှိတဲ့သူတွေက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ လူမူရေး၊ ပညာရေးမှာ တတ်နိုင်သလောက် ဘယ်လိုကူညီကြမယ်ဆိုတာ ကို အရင်လုပ်ကြရင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်၊ လောလောဆယ်မှာ တရုတ်ကြီးလွှမ်းမူကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အရေးက တွေးလို. မရဲ အောင်ဖြစ်နေပါတယ်၊ ဘယ်လို တရုတ်ကြီးရဲ့ လွှမ်းမိုးမူကို ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးက တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က ဘယ်လို campaign လုပ်ကြမလဲဆိုတာ စဉ်းစားသင့်ပါပြီ၊
ဖိုးတုတ် August 14, 2011 at 1:43 AM
ကျွန်တော့် ကိုခြိမ့်ပို.စ်မှာ အလုပ်လုပ်ရင်း ဖတ်မိပါတယ်၊ အလုပ်များနေတာရယ် ၊ ဒီလိုပို.စ်မျိုးမှာ ကွန်မန်.ရေးမိရင် အမြင်မတူတဲ့သူတွေနဲ. အပြန်အလှန်ရေးတတ်ရပြီး မပြီးမစီးဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ကြိုပြီးတွေးမိပါတယ်၊
ဖိုးတုတ် August 14, 2011 at 1:44 AM
ဒီပို.စ်မှာ ကွန်မန်.မရေးတော့ဖူးလို. ဆုံးဖြတ်ပေမဲ့ မနေနိုင်လို.ရေးမိပြန်ပြီ၊ ကျွန်တော့်အမြင်လည်း မှားနိုင်ပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းဟာ တိုင်းပြည်ကို ကောင်းချင်စေတဲ့စေတနာရှိသလို ပြည်တွင်း ပြည်ပက လူတွေရဲ့ အင်အားကို မပြန်.သွားစေပဲ စုစုစည်းစည်း ဖြစ်စေချင်တဲ့သဘောနဲ. ကွန်မန်. ၀င်ရေးတာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော့်လည်း ဘယ်အဖွဲ.အစည်းကိုမှ ကိုယ်စားမပြုပါ၊ သို.သော်လည်း မှန်တဲ့ ဘက်ကို ရပ်တည်တဲ့ အဖွဲ.၊ မွန်မြတ်တာကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ အဖွဲ.အစည်းဘက်ကိုတော့ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပါ့မယ်၊
Anonymous August 16, 2011 at 6:11 PM
အကိုကြီး ရေးတာ ပြည့်စုံကောင်းမွန်လွန်းလို့ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး
လင်္ကာ August 17, 2011 at 9:26 AM
ိုဒီိပို့ စ်ကိုလင့်ပါရစေဗျို့ 
i am very like this post. i said boss we will give tax to myanmar gov. she is very suprising b/c tax is very more than sg and she said me why do u pay tax to myanmar? you already paid sg gov.she said complain your myanmar gov.why don't u complain? i have no words......... thanks
if u do not understanding my sentence pls understanding me.
mgchaint August 17, 2011 at 2:30 PM
If you want to link this post, feel free to do so as long as you credit to Myanmar Cupid (http://mmcpcommunity.net) and TTSweet blog.
As long as more people read especially from Myanmar Authority or those wrote in column in Myanmar newspapers, I am delighted and exhilarated because I feel that my opinion will reach with good intention and positive criticism asaduty of Myanmar citizen.
mgchaint August 17, 2011 at 2:37 PM
i am very like this post. i said boss we will give tax to myanmar gov.
Regarding about this issue, I knew most of the detail and we dropped because Myanmar Authority need to clarify the Myanmar Citizen who worked in foreign country whether it is Resident Citizen or not. From point of view from IRAS (Singapore), they will pursue after Myanmar Authority confirm. Asaordinary citizen of Myanmar, it is beyond our limit (Time, expense and information).
I hope that members of parliament (MP) of Myanmar Senate will solve these problem in future.
ဒီနေ့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က နိုင်ငံခြားရောက်နေကြတဲ့ မြန်မာတွေ ပြန်လာကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်.. နိုင်ငံကို စွန့်ခွာလာသူတွေထဲမှာ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးသမား တင်မကဘဲ level မျိုးစုံက အတတ်ပညာရှင်တွေလည်း ပြည်တွင်းမှာ လုပ်ကိုင်လို့ မရလို့ထွက်လာကြတဲ့ သူတွေလဲ သိန်းချီရှိနေပါတယ်.. သူတို့ အဓိက ပြန်ခေါ်ချင်တာ အဲဒီလူတွေလို့ ယူဆရပါတယ်.. အဲဒါနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှ ဒီလူတွေ ပြန်လာချင်လိမ့်မယ် ဆိုတာမျိုးလေး ထပ်ရေးပေးဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်ဗျို့..
T T Sweet August 19, 2011 at 10:10 AM
ကိုရာဇာ has leftanew comment on your post
နိုင်ငံတော် ၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘဲ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ် မငြိမ်းချမ်းသည့်
တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေကိုမရှာဘဲနဲ့တော့ ကိုညာကြီးတွေ ထုံးစံအတိုင်းတော့
မောင်သိန်းစိန်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်မရှိသော ဖိတ်ခေါ်နည်းဗျူဟာ အင်မတန်ဟာသဆန်
နေသလို သူ့ ရင်တွင်းစကားလဲ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး
ပြည်ပရောက်နေသူများကို နိုင်ငံတော်သစ္စာဖေါက်ကဲ့သို့ ပြောဆိုပြီး တိုင်းရင်းသားကာကွယ်ရေးတပ်တွေကို သဘုံ ပြောက်ကျား အမျိုးမျိုးသော
မကောင်းသတင်းနဲ့ ပြန်ခေါ်နေတာ သူမို့လို့ပြောတာ
( post တွင် မပေါ်သောကွန့်မန့်ကို gmail မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
T T Sweet August 19, 2011 at 10:11 AM
ထိုနိုင်ငံကခိုင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်သောကြောင့်ထိုနိုင်ငံကပေးသောဒေါ်လာက ပြည့်စုံမှု့ကိုမပေးနိုင်ပါ..ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အလုပ်လုပ်တဲ့ပင်ပန်းမှု.အဆင်မပြေဖြစ်မှု့တွေကို ဘာတစ်ခုမှမသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီးကိုယ့်လုပ်အား
ခစစ်စစ်မှန်မှန်ထဲက ၁၀%ဆိုတဲ့မသာထာရေစာ အခွန်ပေးရတာ..ခေါင်းပုံဖြတ်ပြီး မျိုးတူချင်းမိုက်ရိုင်းယုတ်မာတဲ့စိတ်ဓါတ်နဲ့ နေတဲ့သံရုံးဝန်ထမ်း
မရေးရဲတာလား..ကိုယ့်ပြည်မှာနေ..ကိုယ့်ပြည်အကြောင်းကို စကားပြန်လုပ်တာတောင်အပြည့်အစုံနားမလည်..မရေးရဲ..မလုပ်ရဲတဲ့သူကပြောတဲ့စကားဆိုတာ သဲထဲမှာ သေးပေါက်ရင်မှ သေးကွက်ထင်အုန်းမယ်..မွေးရပ်မြေက သရက်..လူကတော့သရက်စေ့ပေါ့နော်..ပြောတတ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်.မြန်မာပြည်မှာနေတုန်းက မိဘမဲ့ဖြစ်လို့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဒီပလိုမာလေးတက်..အစိုးရအလုပ်လေးဝင်..အဝေးသင်လေးတက်လို့ ကိုယ့် ၀မ်းကိုယ်ကျောင်းခဲ့ရုန်းခဲ့ရတုန်းက ဘယ်အစိုးရမှမထောက်ပံ့ခဲ့ပဲ..နိုင်ငံခြားထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်တော့မှ လျော်ကြေးတောင်းတာ ဘာကြောင့်လည်း..ဘာတွေထောက်ပံ့ခဲလို့လည်း..လျော်ကြေးမပေးလို့နယ်မှာနေတဲ့ အဒေါ်တွေကို ရဲကငွေညှစ်တာမိုက်ရိုင်းတာ ဘာကြောင့်လည်း မြန်မာပြည်ပြန်တိုင်းအခွန်ဆောင်ပြီးသားကိုတောင် ဘာညာအကြောင်းပြိး ၁၀ဒေါ်လာရရ ၅ဒေါ်လာရရ အရှက်မရှိတောင်းယုံတင်မက တရားဝင်၁၀ဒေါ်လာပေးရမယ်ဆိုပြီးတောင်းတာ ဘာကြောင့်လည်း. နိုင်ငံခြားမှာ ကလေးမွေးပြီးကလေးပတ်စပို့လုပ်တာ စင်ကာပူသံရုံးကိုရော မြန်မာသံရုံးကိုရော ဘာလို့ပိုက်ဆံ၂ခါပေး၇တာလည်း..စင်ကာပူသံရုံးရဲ့မောက်မာမှု့ကိုမခံစားနိုင်လို့ သူတို့လက်ဝေခံ အေးဂျင့်တွေကိုပိုက်ဆံပေးပြီး လုပ်ရတာတွေ ဘာကြောင့်လည်း..သိပ်ပြီးလူတတ်ကြီးလုပ်ချင်တာတွေဆိုမေးချင်တာတွေအများကြီး........... အရှက်မရှိသရက်စေ့မောင်တင်အေးရေ.....
အောက်ဆုံးမှ ကွန်မန့်ကတော်တော်ပြောင်မြောက်၏။ ကျနော်သာ မောင်တင်အေး (သရက်စေ့)သာဆိုလျှင် ဖတ်ပြီးရှက်လွန်းလို့ ဘလော့ကို တသက်မဖတ်တော့ဟု ကျိန်မိမည်ထင်၏။
Well said. Thanks. A similar one -
Like this post as well.
ဖော်ပြပါဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးတဲ့ အခါမှာ ရင်ထဲတနုံ့နုံ့ ဖြစ်နေတဲ့ ခံစားချက်ကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်..
ကျွန်တော့ရဲ့ နှစ်ဘက်မိဘနှစ်ပါးဟာ လက်ရှိ အစိုးရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေပါ.. အဲဒီတော့ ၀န်ထမ်းလောကမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို မမြင်ချင်ဘဲမြင်နေရ မကြားချင်ဘဲကြားနေရတာတွေ အများကြီးပါပဲ..မြန်မာပြည်ဝန်ထမ်းလောကမှာ အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ပျက်နေတာက အပေါ်ဖားအောက်ဖိဆိုတဲ့ ပေါ်လစီပါ.. သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးတွေက တစ်နေရာကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတော့မယ်ဆိုရင် အဲဒီနေရာက ၀န်ထမ်းတွေအားလုံး လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကို ရပ်ဆိုင်းပြီး ၀န်ကြီးကြိုဆိုရေးအတွက် အလုပ်ရှုပ်ကြရတော့တာပါပဲ.. ဒီကြားထဲမှာ ၀န်ကြီးတင်မကဘဲ ၀န်ကြီးကတော်အပြင် ၀န်ကြီးသားသမီးတွေကပါ ခရီးစဉ်တွေမှာ အစစ်ပါလေတော့ သူတို့တွေရဲ့ စားရေးသောက်ရေးတွေကို လက်အောက်ငယ်သားတွေက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရတော့တာပါပဲ..
ဒီကြားထဲမှာ ၀န်ကြီးကတော်တွေ ဇာချဲ့ရင် ချဲ့တဲ့အလျောက် လုပ်ကိုင်ပေးနေရတာကတော့ လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဇနီးမယားတွေပါ..တခါတလေများဘယ်လောက်တောင်ဆိုးရွားသလဲဆိုရင် ၀န်ကြီးသမီးအိမ်သာသွားတာ နေပူတယ်ဆိုလို့ ဦးစီးအရာရှိမိန်းမက နောက်ကနေထီးနဲ့လိုက်မိုးပေးရတာတွေ၊ ဘယ်လိုဟင်းမှ စားချင်တာဆိုလို့ လက်အောက်ငယ်သားတွေက ချက်ပြုတ်ပြီးဧည့်ခံရတာတွေဟာ မကြားချင်မှအဆုံးပါဘဲ.. ဒီထက်ဆိုးရွားတဲ့ အချက်ကတော့ ၀န်ကြီးနဲ့ ၀န်ကြီးကတော်ရဲ့ ဖိနပ်ကိုတောင်ချွတ်ပေးရတာတွေအထိပါ ပါပါတယ်.. ကျွန်ဝယ်ရာ အဆစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားပုံလိုပါ.. အဲလိုမှ မလုပ်ပေးနိုင်ရင်လည်း အညိုညင်ခံရတာတွေ၊ ဖိနှိပ်ခံရတာတွေကလည်း မကြားချင်တဲ့ အဆုံးပါ… ၀န်ကြီးဆိုတဲ့ ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးမင်းတွေသာ တကယ်တမ်းစဉ်းစားတတ်တဲ့လူတွေဆိုရင် ဒီလိုလေး စဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်.. လက်အောက်ခံ ရုံးအကူတွေ၊စာရေးတွေရဲ့ ၀င်ငွေဟာ ၀န်ကြီးတွေ၊ ညွှန်မှူးတွေရဲ့ ၀င်ငွေတွေ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ယှဉ်ရင် အပုံတစ်ရာပုံတစ်ပုံမရှိပါဘူး.. အဲလိုရုန်းကန်နေရတဲ့ကြားထဲမှာ ၀န်ကြီးမိသားစုရဲ့ ဧည့်ခံကြိုဆိုရေးပါ တာဝန်ယူရတော့ သူတို့ရဲ့လခ လောက်ငှပါ့မလားစဉ်းစားချင်စရာပါ.. သိပ်တော့လည်းစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး.. ဘာလိ်ု့လဲဆိုတော့ သူတို့လည်း သူတို့နိုင်စားလို့ရတဲ့ လူထုရယ်၊ သူတို့လက်အောက်က သူတွေကို ရှိတဲ့ရာထူး၊ပါဝါပြပြီး အနိုင်ကျင့်ရုံပါပဲ… အဲလိုနဲ့ပဲ အပေါ်ဖားအောက်ဖိ လမ်းစဉ်ပေါ်ထွန်းလာတာပါ.. အဲဒီတော့ မျိုးဆက်သစ်ကို ဖော်လံဖား(အလုပ်လုပ်စရာမလို၊ ဖားတတ်ဖို့သာလိုသည်) ဆိုတဲ့ လမ်းမှားရောက်အောင် ပို့တဲ့သူတွေဆိုတာ နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေလို့ပြောရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး…
ခုချိန်ထိတော့ နိုင်ငံသားပြောင်းပစ်လိုက်ဖို့ကိုတော့မတွေးမိသေးပါဘူး… ကျွန်တော် အနှစ် ၂၀ ကျော်လောက်နေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့အိမ်(မြန်မာပြည်)မှာ ပြန်ပြီးလုပ်ပေးစရာတွေ အများကြီးကျန်ပါသေးတယ်…. အုတ်တစ်ချပ်တည်းနဲ့ တိုက်တံတိုင်းတွေမဖြစ်ပေမယ့် တံတိုင်းကြီးတွေကို အုတ်ချပ်တွေအများကြီးနဲ့စုစည်းပြီး တည်ဆောက်ခဲ့ကြတာပါ..